Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Koorsada Dalxiis ee Bahamas Jaantus Cusub
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Mawduucan “Charting a Course New in the Future Development of Global Dalism - Forward, Upward, Onward, Wadajir,” Maamulayaasha sare ee Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas waxay la kulmeen kooxda iibinta iyo suuqgeynta ee ururka si looga wada hadlo mustaqbalka dalxiiska. warshadaha Bahamas iyo doorka lagama maarmaanka ah ee kooxdu ciyaareyso.
Dhacdo la taaban karo ayaa isku soo uruurisay xirfadlayaal dalxiis oo ka kala yimid Xafiisyada Dalxiiska ee Bahamas iyo xubnaha iibka ka imanaya.
Waxaa ka soo qeybgalay xubno ka socda Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Nassau, iyo sidoo kale iibka iyo suuqgeynta kooxda caalamiga ah ee mataleysa suuqyada New York, Atlanta, Florida, Houston, Toronto, Europe, iyo Latin America.
Kulankan "wuxuu diiwaan gelin doonaa mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee xooggeenna iibka."
Wasiirka Dalxiiska & Duulista Hawada, Mudane. Dionisio D'Aguilar; Xoghayaha baarlamaanka, Mr. Travis Robinson; Xoghayaha Joogtada ah, Mr. Reginald Saunders; Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dalxiiska, Marwo Joy Jibrilu iyo Ku-xigeenka Agaasimaha Guud, Mr. Ellison “Tommy” Thompson, waxay ku biireen Agaasimaha Fulinta ee Iibka Caalamiga ah, Mrs. Bridgette King, munaasabadda saddexda maalmood ah ee dalxiiska ah ee isu keentay dalxiiska ifaya. aqoonyahanno ka kala socda Xafiisyada Dalxiiska ee Bahamas iyo xubnaha soo galaya kooxda iibka. Munaasabada waxaa la qabtay June 30 - July 2, 2021.
Wasiirka Dalxiiska & Duulista Hawada, Mudane. Dionisio D'Aguilar, wuxuu cadeeyay in kulankaan "uu diiwaan galin doono mid kamid ah kulamada ugu muhiimsan ee cududeena iibka 50-sano-kudheer taariikhda ururkeena."
Waxaa ka soo qeybgalay xubno ka socda Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada oo ku yaal Nassau, iyo sidoo kale iibka iyo suuqgeynta kooxda caalamiga ah ee mataleysa suuqyada waaweyn ee New York, Atlanta, Florida, Houston, Toronto, Europe iyo Latin America.